भारतको आर्शिवाद लिएर फर्किएका बाबुराम प्रधानमन्त्रीको दौडमा - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
अबकाे सरकार बहस
दाहाल–नेपाल समूहसंग चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने भट्टराईको नयाँ प्रस्ताव
२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार १९:११:००
एक हप्ता दिल्लीमा उपचार गरेर फर्किएका जसपा नेपाल डा. बाबुराम भट्टराई प्रधनमन्त्री बन्ने दौडमा होमिएका छन् । एकवर्ष भित्र चुनावमा जाने र सहमतीय सरकारको नेतृत्व आफूलाई दिन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको दौडमा होमिएका हुन । दाहाल–नेपाल सूमहसंग मंगलबारनै छलफल गरेर भट्टराई आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार भट्टराईले प्रचन्ड र माधव नेपाललाई चुनावमा पनि सहकार्य गरेर जाने प्रस्ताव गरेका छन् । भट्टराईको भनाईको उदृतगर्दै एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार सहमतीय सरकारको नतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने र चुनावमा पनि सहकार्य गरेर बहुमत ल्याउन सके चुनावपछि दाहाल वा नेपाललाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाल फर्किएसंगै समाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न आतुर रहेको सन्देश मंगलबारनै भट्टराईले दिइसकेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि देश फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न चालेको कदम असंवैधानिक ठहर भएपछि नैतिक संकटमा परेका छन् । तर, उनले राजीनामा नदिई संसदको सामना गर्ने सन्देश दिएपछि सरकार गठन विभिन्न पक्षीय छलफल तिव्रता पाइरहेकावेला भट्टराई दौडमा लागेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । भट्टराईले चुनावी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउन कांग्रेस सभापति शेर देउवालाई गोप्ने सन्देश लिएर बुधवार विहान जसपाका एक नेता बुढालिकन्ठ पठाएका छन् । भारतमा उपचारपछि फर्कने वित्तिकै प्रधानमन्त्री माग गरेर दौडधुपमा लाग्नुले भारतको आर्शिवाद बाबुरालाई रहेको आंकल नेपाीली राजनीतिमा देखिएको छ ।
प्रधानन्त्री दौडमा अरु को को ?
अब ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने निश्चितप्रायः छ । विश्वासको मत लिन ओली असफल हुने अवस्था विद्यमान रहेकाले प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । प्रचण्ड अहिलेको अवस्थामा आफ्नो समूहको संसदीय दलका नेता पनि छन् । यसकारण पनि उनी प्रधानमन्त्रीका मुख्य दाबेदार हुन् । प्रचण्डले माधव नेपालको साथ पाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको पनि साथ हुनुपर्छ ।
माधवकुमार नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो समययता जुध्दै आएका थिए । नेपाललाई प्रचण्डले साथ दिनुपर्ने अवस्था भएमा प्रधानमन्त्रीको बलियो दाबेदार हुन्छन् । यतिले मात्र पुग्दैन । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको साथ हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको दौडमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि छन् । देउवालाई प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा साथ दिएमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव प्रचण्ड र नेपालले विगतमै गरेका थिए । तर, देउवाको भुमिका स्पष्ट देखिएको थिएन । तैपनि, प्रचण्ड र नेपालको साथमा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा देउवा पनि छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत साथ हुनसक्छ । प्रचण्ड र नेपाललाई रोकेर देउवासँग गठबन्धन गर्ने ओलीको पनि रणनीति छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । नेकपाको दुवै समूह र नेपाली काँग्रेसबीच प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप भएमा ठाकुर र भट्टराईको सम्भावना बढ्न सक्छ । ठाकुरको नाममा काँग्रेस पनि सकारात्मक बन्न सक्छ । तर, नेकपा र काँग्रेस दुवै आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्थामा छन् ।
नेताहरुबीच प्रधानमन्त्रीका लागि तिव्र प्रतिष्पर्धाले ओलीलाई नै मौका आउने सम्भावना नभएको होइन । उनले राजीनामा दिएमा या अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहि नै रहन्छ । अर्कोतर्फ, उनी अर्को प्रधानमन्त्री नबनेसम्म पदमै रहिरहने हुँदा तत्काल नहट्ने अवस्था पनि रहन्छ । ओलीले देउवाको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्न सक्छन् । तर, त्यो सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिजमा दर्शकलाई मैदान प्रवेशमा निषेध :आज...